Dhamaan barnaamijka Copa América Centenario ee kujira iPhone-kaaga oo wata barnaamijka rasmiga ah | Wararka IPhone
Dhamaan barnaamijka Copa América Centenario ee kujira iPhone-kaaga oo wata barnaamijka rasmiga ah
Cadad cusub oo ka mid ah Copa América ayaa bilaabmay maalmo ka hor (waxaa la qaban doonaa inta u dhexeysa 3-da ilaa 26-ka Juun), dabcan Concacaf-na waxay diyaarisay a barnaamijka rasmiga ah ee iPhone chalkaas oo aan la socon karno wax kasta oo ka dhaca Mareykanka, maadaama ay naga caawinayso taageerayaasha kubada cagta inaysan ka dhamaan ciyaaraha quruxda badan ka hor Euro 2016 ee aadka loo sugayo.
2 Isticmaal fudud
Codsigu wuxuu leeyahay aasaasiga looga baahan yahay codsi kasta oo ka mid ah tartanka kubbadda cagta ama tartanka: jadwalka dhammaan jadwalka ciyaarta, suurtagalnimada in la raaco xulashada jecel shaqsi ahaan, dhammaan faahfaahinta koox kasta oo kaqeyb galeysa ama ogeysiisyada riixa oo la socda xaqiiqooyinka la xiriira.
Intaa waxaa dheer, codsigu wuxuu leeyahay muuqaal cusub oo noocan ah barnaamijyada ah in taageerayaasha MSQRD iyo Snapchat ay aad u jeclaan doonaan wax badan: miirayaasha. Waan heli karnaa rinjiga wajiga dalwaddii xulashadayadii aan jeclaan jirnay markii dambena aan ku wadaagno shabakadaha bulshada taageeradeena dhammaan asxaabteena. Waxay ahayd waqti go'an intaysan bilaabin inay ku hirgeliyaan barnaamijyadan noocan ah, iyadoo la tixgelinayo guusha codsiyada kor lagu soo sheegay, waana tanaa.
Codsiga waa mid aad u fiican in la isticmaalo, wuxuu leeyahay nashqad taxaddar leh oo leh midab midab leh oo loo xushay inuu siiyo isbarbardhig iyo u fududee akhriska xogta si dhakhso leh, taas oo aad loogu qadariyo barnaamijkan qaabkan ah oo aan mararka qaar si dhakhso leh u eegno. Habka loo maro barnaamijka waa mid siman oo aan qalad lahayn, ugu yaraan illaa iyo inta jiilka ugu dambeeya ee aaladaha Apple ay ka welwelsan yihiin.
en el qaybta multimedia Waxaan sidoo kale si fudud ugu kala guuri karnaa sawirada iyo fiidiyowyada laga soo dhejiyay ururka, waana inaanan ilaawin inaan sidoo kale la socon karno wax walba oo ka dhaca tartanka iyo kooxdeena haddii aan raacno wararka nugul ee wararka ku daraya. Dhinaca kale, waa in la sheegaa inay la jaan qaadi karto Wallet-ka si ay ula aadaan ciyaaro leh galitaanka digitized-ka ee iPhone-keena.
Marka la soo koobo, waxaan wajaheynaa codsi muhiim u ah dhammaantiin adiga oo raacaya Koobka Centennial America ama ugu yaraan waxaad xiiseyneysaa inaad fiiriso sida tartanku u socdo maalmaha oo dhan. Dabcan codsigu gebi ahaanba waa bilaash oo ma laha iibsasho isku dhafan nooc kasta oo ay tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Dhamaan barnaamijka Copa América Centenario ee kujira iPhone-kaaga oo wata barnaamijka rasmiga ah
Bose waxay kusii kordhineysaa shidaalka dabka: QuietComfort waxay ka takhalustaa fiilooyinka